“Wasiirkii Baa Qayilaya, Agaasimihii, Madax-Dhaqameedkii, Dhakhaatiirtii, Ummad Kuwooda Hormuudka U Ahi Xumaan U Horseedaan Way Baaba’aysaa” | Foore News
Home Warar “Wasiirkii Baa Qayilaya, Agaasimihii, Madax-Dhaqameedkii, Dhakhaatiirtii, Ummad Kuwooda Hormuudka U Ahi Xumaan...
“Wasiirkii Baa Qayilaya, Agaasimihii, Madax-Dhaqameedkii, Dhakhaatiirtii, Ummad Kuwooda Hormuudka U Ahi Xumaan U Horseedaan Way Baaba’aysaa”
Hargeysa, October 3, 2020- (Foore)- Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Barbaraawi) oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer Somaliland ayaa walaac weyn ka muujiyay umaddana uga digay dhibaatada ay leedahay marka dadka kuwooda hormuudka u ahi xumaan ugu noqdaan tusaale halkii ay ka ahayd in ay wanaagga tusaale ugu noqdaan taasina ay saamayn xun ku yeelanayso Bulshada dhaqankeeda iyo wanaaaggeeda.
Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Barbaraawi) oo khudbaddii Jimcaha ee shalay kusoo qaatay xaaladda kudayashada iyo saamaynta ay ku leedahay tarbiyadda umadda ayaa waxa uu sheegay in ummad Wasiirradoodii, Agaasimayaashoodii, Madax-dhaqameedkii, Dhakhaatiirtii iyo waalidkii waaweynaaba xumaan samaynayaan oo qayilayaan in aanay ubadka iyo intii ku dayanaysay aan wax kale laga filayn, umadduna isku dayato iyada oo qofba wixii uu sameeyo lagaga dayanayo shar iyo khayr waxaanu si gaar ah uga digay dhaqamada xun ee loo baahan yahay in laga waantoobo sida qaadka iyo xumaanaha kale oo dhan.
Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Barbaraawi) oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu Khudbaddiisa ku yidhi: “Waxaan leeyahay madaxdu dadka tusaale fiican ha ugu noqdaan. Runta tusaale fiican ha ugu noqdaan. Khayrka, wanaagga iyo cibaadada tusaale fiican ha ugu noqdaan oo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan tusaale fiican ha ugu noqdaan. Madax dhaqameedka salaadiinta, ugaasyada iyo boqorrada iyo cuqaashu tusaale fiican dadka ha u noqdaan. Umaddan ay u taliyaan way eeganayaan oo way ku dayanayaan. Wanaag ay kaga daydaan oo ay iyagu ku sifoobaan. Dhakhaatiirtu dadka tusaale fiican ha u noqdaan. Culimadu dadka tusaale fiican ha u noqdaan. Macallimiintu ardayda ay wax u dhigayaan tusaale fiican ha u noqdaan. Waalidku ubadkiisa iyo usradiisa iyo qoyskiisa tusaale fiican dhaqanka ha ugu noqdo. Qof walba oo umaddan ka mid ahi ha is dhigo goobta masuuliyadda. In uu masuul yahay oo ay masuliyadi saaran tahay naftiisa ha dareensiiyo oo wax kasta oo xun samaysteeda naftiisa ha uga tudho umaddiisana ha uga tudho oo tusaale yaanu ugu noqonin xumaanta”
“Maanta innaga mashaakilka inna haysta waxa ka mid ah dadkii lagu dayan lahaa in badan oo ka mid ahi masuuliyadoodii way dayaceen waalidkii isaga ayaa sigaarka cabaya. Isaga ayaa qayilaya isaga ayaa caytamaya isaga ayaa xumaanta samaynaya ubadkiisii marka ay sameeyaanna wuu la yaabayaa. Ilmihii yaraa ee haashka qaatay ee la yidhi waa ish’e isga tuur waxa uu yidhi waa Ishtii aabbo. Waayo, waxa uu arkayay aabihii oo sita. Qaadku waa la mid. Caydu waa la mid. Macallinkii waxa laga yaabaa in uu ardaydii caayo ama uu hadallo xun ku yidhaahdo ama waxyaabo xun in uu hortooda ku sameeyo. Madax-dhaqameedkii iyo dhakhaatiirtii baa qayilaya. Dhakhaatiirtii ay ahayd in ay dadka ka waaniyaan dhibaatada qaadka oo ay dhibkiisa u sheegaan ayaa iyagu qayilaya oo marfashyo gaar ah leh. Sow umaddu ku dayan mayso?. Madax-dhaqameedkii baa qayilaya. Waliba marka baladkan si gaar ah loo eego. Niman odayaal ah oo madax dhaqameed ah oo ka yimid goboladaa kale ee soomaaliya halkan ayay yimaaddeen si ay ula kulmaan kuwa halkan jooga. Qolo kiiloo kiiloo qaad ahi mid walba hor yaallo ayay guri ugu galeen. Cabbaar markii ay aamusnaayeen ayay yidhaahdeen waar salaadiintii meeye?. Markaasaa la yidhi waa kuwan!. Iyagu waxa ay u haysteen in ay yihiin mooryaan ama dad kale oo shaqaale iyo wax ah oo madax dhaqameedka ilaalinaya. Illayn halkii ay ka yimaaddeen in uu qof sharaftiisa dhawranayaa ma qayilo. Wasiirkii baa qayilaya, oo Agaasimihii baa qayilaya oo waxyaabo aan wanaagsanayn samaynaya. Waar umadda dadka hormuudka iyo tusaalaha u ah ee ay eeganayaan ee ay higsanayaan haddii ay tusaale xun u noqdaan umaddaasi way baaba’aysaa” ayuu yidhi Sheekh Barbaraawi.
Previous articleSh. Dirir Oo Bulshada Islaamka Uga Digay Halista Yuhuudda Iyo Dhibaatada Ku Lammaan Heshiisyada Dalalku La Galayaan Muddooyinkan
Next articleWasiir Xukuumadda Muuse Biixi Ka Tirsan Oo Madal Loo Dhan Yahay Kaga Dalbaday Reer Awdal Inay Ka Cafiyaan Hadal Deeq Qaaf Ah Oo Hore Uga Siibtay Iyo Nuxurka Raalli-galintiisa